Printing Ntuziaka – The Tailoress
Ibi akwụkwọ gị copyshop PDF:
1. Download ọhụrụ version nke Adobe agụ:
2. -Emeghe ụkpụrụ PDF na Adobe Reader.
3. Họrọ ebipụta. N'okpuru 'PAGE SIZING na-ejizi’ họrọ 'Akwụkwọ Mbisa Ịma Ọkwa'. Ọzọkwa ịlele igbe n'okpuru 'Poster’ n'ihi na 'bee akara’ na 'kwudịrị na'. Ị ga-enwe ike ịhụ gị ụkpụrụ previewed dị ka ọ ga-ebipụta aka nri nke ebipụta dialog igbe
4. Pịa 'Page Mbido’ na ala n'akụkụ aka ekpe ịhọrọ gị na-ebi akwụkwọ akwụkwọ size.
6. Ị ga-ahụ mkpa ewepụtụ page n'akụkụ peeji na dakọtara na peeji nke. Ibe ọ bụla ga-ngalaba-ordinates i.e. (1,3). The mbụ ọgụgụ na-agwa gị na kọlụm ọnụ ọgụgụ na nke abụọ na-agwa gị na a pụrụ isi chọta na kọlụm.
Họrọ Bipute si bụla PDF onye nkiri ị na-eji. Gbaa mbọ hụ ka ebipụta ntọala “100%”, “FULLSCALE” ma ọ bụ “n'ezie” size iji zere gị onye nkiri si resizing na peeji nke.